Ukutya kwizifo zesibindi
Ukutya kwesifo sesibindi kunika inani elichanekileyo leekhalori, izondlo kunye neencindi ozifunayo ukulawula isifo sesibindi. Izifo zesibindi ezinje nge-hepatitis kunye ne-cirrhosis inokutshintsha indlela umzimba osebenzisa ngayo izakha mzimba kukutya. Abanye abantu abanesifo sesibindi abanakufumana izondlo ezaneleyo kwaye banciphise umzimba. Ingcali yokutya iya kusebenza nawe ukuphuhlisa isicwangciso sokutya ngokusekwe kuhlobo lwesifo sesibindi onaso.
Kubaluleke kakhulu ukutya ukutya okwahlukeneyo kuwo onke amaqela okutya yonke imihla ukuze uhlale kubunzima obusempilweni. Awunakuva ulambile okanye uhluthi kanye emva kokutya. Yitya izidlo ezincinci ezi-4 ukuya kwezi-6 yonke imihla ukuze uqiniseke ukuba ufumana iikhalori ezaneleyo. Buza i-dietitian ukuba zingaphi iikhalori kwaye zingakanani ezi zinto zilandelayo kufuneka uzidle ngosuku ngalunye:
Iiproteni ibalulekile ngomlinganiselo wayo olungileyo. Oku kutya kulandelayo yimithombo elungileyo yeprotheni. Inani leprotein (kwiigrama) lisondele kukutya ngakunye.
Ii-ounces ezi-3 zenyama, inyama yehagu, ikarikuni, inkukhu okanye intlanzi (21 gram)
1 indebe yobisi okanye iyogathi (8 gram)
1 iqanda elikhulu (7 gram)
Iipunipoli ezi-2 zebhotolo yamandongomane (7 gram)
½ indebe ye tofu (7 gram)
¼ indebe yecottage cheese (7 gram)
I-ounce enye yeeshizi (i-7 gram).
Ikomityi yepinto ephekiweyo, yezintso, okanye yeembotyi ezimhlophe (3 gram).
Amafutha kunokuba nzima ukwetyisa abanye abantu abanesifo sesibindi. Amafutha angacoliyo ayasuswa ngokuhamba kwamathumbu. Ukuba unale ngxaki yempilo, unokufuna ukutya amanqatha amancinci. Buza ugqirha wakho okanye isazi sokutya ngolwazi olungakumbi malunga nokutya okunamafutha asezantsi.
IiCarbohydrate kusenokufuneka zilinganiselwe ngenxa yokuba zichaphazela amanqanaba eswekile yegazi. Isifo sesibindi sinokubangela amanqanaba eswekile egazini ukuba anyuke kakhulu okanye abe sezantsi kakhulu kwabanye abantu. IiCarbohydrate zifumaneka kwisonka, ipasta, irayisi, ukutya okuziinkozo, iinkozo (irayisi, ioatmeal), kunye nemifuno enesitatshi (iitapile, umbona, ii-ertyisi). I-dietitian yakho iya kukunceda wenze isicwangciso sokutya kunye nenani elichanekileyo le-carbohydrate.
Ukutya ukunciphisa okanye ukunqanda:
Buza i-dietitian ukuba ufuna ukunciphisa okanye ukuphepha ukutya okuthile. Oku kuya kuxhomekeka kuhlobo lwesifo sesibindi kunye nezinye iingxaki zempilo onazo.
Isodium Kusenokuba yimfuneko ukunciphisa oko xa umzimba wakho ugcina iziselo. Xa ugcina amanzi, uya kuba nokudumba emzimbeni wakho. Buza ugqirha wakho ngolwazi olungakumbi malunga nokutya okuphantsi kwe-sodium. Okunye ukutya okuqulethe isixa esikhulu sesodiyam:
Bacon, chorizo ​​kunye nenyama yegourmet
Imifuno enkonkxiweyo kunye nejusi yemifuno
Ukutya okubandayo kunye nokutya okufakwe ngaphakathi, okunje ngeetshiphusi kunye nee-pretzels
I-Soy, i-barbecue kunye ne-teriyaki sauce
Ulwelo kusenokufuneka zilinganiselwe ukuba unokudumba. Ulwelo lubandakanya amanzi, ubisi, ijusi, isoda kunye nezinye iziselo. Okunye ukutya kunamanzi, afana neesuphu. Ukutya okungamanzi kubushushu begumbi, njengejeli okanye iipopu, kufuneka kubalwe njengamanzi. Buza ugqirha otya ukutya okutyayo ukuba kufuneka usele amanzi angakanani suku ngalunye.
Iziselo ezinxilisayo banokusenza mandundu isifo sakho sesibindi. Kubalulekile ukuba ungaseli tywala. Thetha nogqirha wakho ukuba unemibuzo ngotywala okanye ufuna uncedo ukuze uyeke ukusela utywala.
Ezinye izikhokelo zokutya ekufuneka zilandelwe:
Ingcali yokutya inokucela ukuba uthathe izongezo zevithamini kunye nezamaminerali. Thatha kuphela isongezelelo esinconyelwa ngugqirha wakho. Thetha kwidayiti yakho malunga nolunye utshintsho ekufuneka ulwenzile kwindlela otya ngayo. Isifo sesibindi sinokubangela iingxaki zempilo onokuzilawula ngokutshintsha kokutya.
Fowunela ugqirha wakho okanye ugqirha wezidlo ukuba:
Ukufumana okanye ukunciphisa ubunzima obuninzi ngexesha elifutshane.
Unemibuzo okanye inkxalabo malunga nokutya kwesifo sesibindi.
Yiya kutyelelo lwakho olulandelayo kunye nogqirha okanye ugqirha wezidlo njengoko kuyalelwe:
Bhala phantsi imibuzo yakho ukuze ukhumbule ukuyibuza xa undwendwela.
flonase kunye noxinzelelo lwegazi
isetyenziselwa ntoni itoradol
iziphumo ebezingalindelekanga ze-predisone
coupon yokuhamba kwezinto zonyango